I-China Reactive Dyes Printing Thicker LH-3185A abavelisi kunye nababoneleli |Yiman Lanhua
I-Reactive Dyes Printing Thicker LH-3185A
I-LH-3185A luhlobo lwe-acrylate ye-polymerized dispersoid, esebenzayo ekutyebeni koshicilelo olusebenzayo lomqhaphu, i-ramie, iflaksi, i-bamboo fiber okanye i-wax elinganisa ushicilelo.
-LH-3185A luhlobo lwe-acrylate polymerized dispersoid, esebenzayo ekutyebeni kokushicilela okusebenzayo kumqhaphu, i-ramie, i-flax, i-bamboo fiber okanye i-wax elinganisa ukuprinta.
Iimpawu eziphambili kunye neeNzuzo eziQhelekileyo:
Ukusebenza kakuhle kwamanzi, kulula ukudlula isikrini sokushicilela.
Ukukwazi ukubamba amanzi kakuhle, ulwandlalo olubukhali.
Kulula ukuhlanjwa, umqheba othambileyo welaphu eliprintiweyo.
Umbala oqaqambileyo kunye nesivuno esiphezulu sombala.
Isetyenziswe nge-alginate ye-sodium okanye njenge-thickener emva kokwenza intlama.
Ifomu yoMzimba Ulwelo
Imbonakalo Ulwelo lwe-viscous olunemilky
Umlinganiswa we-Ionic I-anionic
1. Iresiphi yoshicilelo esebenzayo:
Amanzi X g
Yixhathise ityuwa 1g
I-sodium hexame taphosphate 0.5 - 1g
I-sodium bicarbonate 1 – 3g
LH-3185A 2- 3g (esetyenziswa nesodium alginate)
Idayi ezisebenzayo Y g
Iyonke 100 g
2. Inkqubo yokuhamba: Ukulungiswa kweNcamathelisa-I-Rotary okanye i-flat screen printing-Drying(100-110℃, 1- 2 min)-Ukutshisa (102-105℃, 8-10 min) - Ukuhlamba.
Qaphela: Cebisa ukuvuselela phambi kokusetyenziswa, inkqubo eneenkcukacha kufuneka ilungelelaniswe ngokwemizamo yokuqala.
Imiyalelo yokusebenza kunye nokhuseleko:
1. Phakamisa ukulinganisa kunye nokuhlambulula ngokwahlukileyo xa ulungiselela isisombululo, uze udibanise ngokulandelelana kwaye ugxobhoze ngokupheleleyo.
2. Ukucebisa kakhulu ukusebenzisa amanzi athambileyo kwi-dilution, ukuba amanzi athambileyo awafumaneki, ukuzinza kufuneka kuhlolwe ngaphambi kokwenza isisombululo.
3. Emva kokuhlanjululwa, akufanele kugcinwe ixesha elide.
4. Ukuqinisekisa ukhuseleko, kufuneka uphonononge i-Material Safety Data Sheets ngaphambi kokusebenzisa le mveliso phantsi kweemeko ezizodwa.I-MSDS iyafumaneka eLanhua.Phambi kokuphatha naziphi na ezinye iimveliso ezikhankanywe kwisicatshulwa, kufuneka ufumane ulwazi olukhoyo lokhuseleko lwemveliso kwaye uthathe amanyathelo ayimfuneko ukuqinisekisa ukhuseleko lokusebenzisa.
Ukupakishwa kunye noGcino:
Iplastiki yomnatha wegubu eli-130 kg, inokugcinwa iinyanga ezi-6 phantsi kobushushu begumbi kunye nemeko ye-hermetic ngaphandle kokuchaswa lilanga.Ukuqinisekisa ukuba umgangatho wemveliso ugciniwe, nceda ujonge ixesha lokunyaniseka kwemveliso, kwaye kufuneka isetyenziswe ngaphambi kokuqinisekiswa.Isikhongozeli kufuneka sivalwe ngokuqinileyo xa singasetyenziswa.Kufuneka igcinwe kwiqondo lokushisa eliqhelekileyo legumbi, ukuthintela ukubonakaliswa kwexesha elide kubushushu obugqithisileyo kunye neemeko ezibandayo, ezinokubangela ukuhlukana kwemveliso.Ukuba imveliso yahlulwe, gxobhoza iziqulatho.Ukuba imveliso ingumkhenkce, yinyibilikise kwindawo efudumeleyo kwaye ugxobhoze emva kokunyibilika.
Ezi ngcebiso zingentla zisekelwe kwizifundo ezibanzi eziqhutywe ekugqityweni okusebenzayo.Nangona kunjalo, abanatyala malunga namalungelo epropathi abantu besithathu kunye nemithetho yangaphandle.Umsebenzisi kufuneka avavanye ukuba ngaba imveliso kunye neSicelo: zilungele iinjongo zakhe ezikhethekileyo.
Thina, ngaphezu kwakho konke, asinatyala kwimihlaba kunye neendlela zeSicelo: ezingabhalwanga phantsi sithi ngokubhaliweyo.
Ingcebiso yokumakisha imimiselo kunye namanyathelo okukhusela anokuthathwa kwiphepha ledatha yokhuseleko.
Ngaphambili: Umthombo weFactory I-Detergent Textile-Hydro Peroxide Stabilizer LH-P1510-Yiman Lanhua
Okulandelayo: I-High Effective Scouring Penetrant LH-P1320
Acid anti intonga isepha arhente LH-1308
I-Acid yeNdalo ecocekileyo yokuPrinta incamathelo LH-317H
T Shirt Elastic White Silk Ink, Ukukhupha Cola iBinder, Hlamba-Sisasazekile Thickener, I-Acrylic Seaping Agent, Abancedisi beMichiza, Ubushushu obuphezulu bePigment,